Nhau - Ndeipi mhepo uye kumanikidza kuramba kweiyo precast kabhini?
Chii chinonzi mhepo uye kumanikidza kuramba kweiyo precast kabhini?
Yakagara iri imwe yekutarisisa kwevanhu, yakagadzirirwa tangi seyakazara inowanzo sanganisira moduli yepasi, iyo yakatenderera bhokisi module, yedenga remba uye yekuisa zvishongedzo zvichingodaro, kunyanya nebhaudhi inosunga pakati pemamojuru akasiyana, saka iwe inoda kuongorora yakagadziridzwa kabhini yemhepo kuramba uye kutakura huremu, iyo yakanakisa nhamba pakati pemamojuru inoda kuuya kubhaudhi, nekubatanidza mabhaudhi, ita module yega yega pakati peyakagadzikana.
1, kumanikidza kuongorora
Iyo yakafananidzirwa kabhini ine simba rakanyanya kana rakasimudzwa uye kana mhepo yemhepo ingangoita gumi nemaviri, saka inoda kuongororwa nezviitiko zviviri izvi.
Pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, kabhini yakagadzikwa inotakurwa nemarori, zvinoenderana nehurongwa hwekushushikana mupfungwa kana ichisimuka, kushushikana kukuru kwetangi precast kana mota ichitendeuka, zvinoenderana nemutemo, kumhanya kwakanyanya apo mota iyi isingakwanise kudarika 30 km / h , saka inogona kudhirowa nekuverenga, kuitira kuti precast tangi irege kuburitsa deformation pamakona, unofanirwa kushandisa iro rebhokisi repadivi kutenderedza dzinenge makumi mana nesere,
12 mabhaudhi akatenderedza furemu yekupedzisira kuti uwane iko kusimba
Pamusoro pesimba panguva yekufambisa, kabhini yakagadzwa inofanirwa kutakura kumanikidza mune simba 12 mhepo, iyo yekumhanyisa mhepo inogona kusvika 34km / h, uye mhepo yakanyanyisa kuiswa kune rimwe divi, asi mhepo nzira nguva dzose zvakafanana, saka divi rega rega rinofanirwa kusungwa zvinoenderana nemhando yepamusoro.
Mushure mekuverenga, iyo shoma nhamba yemabhaudhi parutivi rumwe norumwe inofanira kunge iri makumi mana, uye kushandiswa kweM12 mabhaudhi kunogona kushanda zvakanyanya kugadzirisa.
2. Mhepo kuramba simulation
Iyo yakagadziriswa module inodawo kuenzaniswa uye kuverengwa uchipesana nemhepo kana yaiswa mukushanda kuti uwane chaiyo data.
Mhepo kuramba uye kumanikidza kutakura huremu hwetabhenakeri kabhini inonyanyo kufundwa yakanangiswa nekamhepo kesimba remakamuri akagadzirwa. Nekufananidza simba remhepo yemhepo yekamuri yakagadzikwa, iko kushandurwa kwekamuri rakagadzirwa kunowanikwa, kuitira kuti kushushikana kwakanyanya kwekamuri rakagadzika kuve kushoma pane muganho wegoho rehurongwa hwese hwesimbi.
Nekuverenga, kunetsekana kwakanyanya kweiyo kabhini kunogona kusvika 198.87MPa kana mhepo yasvika padanho 12. Kushushikana kwacho kwakadzika, saka shanduko idiki kana iko kushushikana kwese kwekamuri kuri pazasi pe80MPa.
3. Mhedziso ongororo
Kuburikidza nemamojuru akasiyana-siyana eakagadzirirwa matangi ekubatanidza kuisa, uchishandisa bhaudhi kumisikidzwa pakati pemamojuru, kugona kwekumanikidza, kunogona kuwedzera mushe mabhaudhi akaenzana, ndiyo kiyi yekuvandudza kugona, simba rakagadziriswa matangi kuvaka dhizaini kwakakosha, kuburikidza kukarukureta pamusoro apa, kunogona kupedziswa kuti bhaudhi saizi uye nzvimbo yekukosha kwekushandisa,
Kugadziriswa kwekugadzirisa kunogona kuitwa.
Kuburikidza neongororo iri pamusoro yekushomeka kwemhepo uye kugona kutakura mutoro weyakagadzika kabhini, iyo kabhini yakagadzwa haizokonzere kukanganisa kwakawanda mukukwiridzira uye kutakura, pamwe nemamiriro ekunyanyisa kwemhepo mhepo, uye kurasikirwa kunoenderana zvichaderedzwa.